Iindaba-Umgaqo osebenzayo wevalve yebhola yombane
Ivalve yebhola yombane inesenzo sokujikeleza iidigri ezingama-90. Umzimba weqhude ungqukuva ujikeleze umngxunya okanye ijelo elidlula kwi-axis yalo. Ivalve yebhola isetyenziswa ikakhulu kumbhobho njengevalve yebhola yombane ukusika, ukusasaza kunye nokutshintsha indlela eya kumbindi. Ifuna ukujikeleza kuphela iidigri ezingama-90 kunye netorque encinci ukuvala ngokuqinileyo. Ivalve yebhola yeyona ilungele ukusetyenziswa njengokutshintsha nokucima ivalve. Uphuhliso luyile ivalve yebhola yokunyakaza kunye nokulawula ukuhamba, njengevelufa yebhola eyenziwe ngo-V. Ezona mpawu ziphambili zevalve yebhola yombane bubume bayo obumbeneyo, ukutywina okuthembekileyo, ulwakhiwo olulula kunye nolondolozo olufanelekileyo Umphezulu wokutywina kunye nomphezulu ongqukuva zihlala zikwimeko evaliweyo, ekungekho lula ukonakaliswa sisixhobo. Kulula ukusebenza nokugcina. Ilungele amanzi, izinyibilikisi, iiasidi kunye negesi yendalo. Umsebenzi osebenzayo ukwalungele ukuba phakathi kunye neemeko ezinzima zokusebenza, ezinje ngeoksijini, i-hydrogen peroxide, imethane kunye ne-ethylene, njl. Umzimba wevalufa yebhola unokudityaniswa okanye ukudityaniswa.
Ivalve yebhola yombane yindibaniselwano yevalufa yebhola yohlobo lweplagi kunye nesixhobo sokwenza umbane. Isakhiwo somzimba wevalvevu sisiporo esijikeleza iidigri ezingama-90. Isixhobo se-actuator sisebenzisa uphawu oluqhelekileyo lwe-0-10 mA. Iqela leemoto liqhuba izixhobo kunye ne-worm gear angle torque. Lungisa ivalve ngebhokisi yokutshintsha. Ukusetyenziswa kwayo ikakhulu kuveliswa sisixa semisebenzi yangoku kunye nohlengahlengiso.
Izinto ezisetyenziswa ngabantu ezisebenza ngombane zibandakanya ukujika-jika, ukujika kube kanye, okrelekrele, ii-actuator zombane, ii-actuator zombane, izixhobo zokuqhushumisa, kunye nezixhobo ezincinci. Iibhola zebhola ikakhulu zibandakanya iibhola zebhola ezidadayo, iivalvu zebhola ezingatshintshiyo, iivelufa zebhola e-O ezimile, iivelufa zebhola ezimise okwe-V kunye neendlela ezintathu zebhola. Ukuphunyezwa kunye noqwalaselo lwevalvu yebhola xa ivelisiwe ingavelisa iimveliso ezahlukeneyo. Unokongeza ibhokisi yolawulo lokusebenza okukude, kwaye ungeze ezinye izinto kwi-actuator ukufezekisa usetyenziso olusebenzayo, njengokufaka indawo yokubeka umbane ukulungelelanisa ukuhamba, kunye nokuchasana / ukuguqula indawo yokuguqula indawo yevalve kungasetyenziselwa ukulawula izivalo. Isalathiso kunye nolawulo lokuvula indawo, indlela yevili lesandla inokusetyenzwa ngesandla xa ingekhoyo ngoku, kunye nezinye izixhobo ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zibandakanya ukwambathisa imikhono, ukutshintshela ubungqina bokuqhushumba, njl.nokhetho lokuqala lunokukhethwa ngokweemeko zokusebenza .
Iiakhawunti zevalufa zebhola yombane ngoku zisetyenziswe ngokubanzi kwioyile, igesi yendalo, amayeza, ukutya, amandla ombane, amandla enyukliya, umbane, ubonelelo lwamanzi kunye nomsele, ukufudumeza, isinyithi kunye namanye amashishini, kwaye ziyimveliso ebalulekileyo yomatshini kulwakhiwo lukazwelonke. Ikwayimveliso ebaluleke kakhulu kulwakhiwo lobuchwepheshe. Ihlala kakhulu kwisabelo sentengiso, ikakhulu ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezinje ngomsebenzi owomeleleyo, ubungakanani obuncinci, ukusebenza okuthembekileyo, umthamo omkhulu wokujikeleza, ukukhanya kunye nabantu abancinci, kunye nolawulo olukude lweevalvu zebhola yombane. Iivalvu zombane zombane azigungqi nje, ukuvala, ukusika, njl.Umveliso olungileyo wokucima kunye nokuphambukisa, okanye imveliso eyoyikekayo yokukhetha inkqubo yokuhamba kokuhamba. Inempawu ezininzi ezinje ngokuxhathisa koxinzelelo, ukumelana nobushushu, ukumelana nokubola, ukunganyangeki kokuhamba okuphantsi, ubomi benkonzo ende, kunye noluhlu olubanzi lwesicelo.
Ixesha Post: Jun-12-2021